December | 2013 | Myanmar Mp3 Album
ရိန်မိုး & နေတိုး – ဖန်ဆင်းရှင် (2013) [Album]
Quality: 320kbps MP3 02. နေတိုး – ထွက်ပေါက် (exit) 03. ရိန်မိုး – ချိုချစ်ခါး 04. နေတိုး – လေနှင်တိမ် 05. ရိန်မိုး – ကောင်မလေး 06. ရိန်မိုး၊ နေတိုး – ချစ်ခွင့် 07. ရိန်မိုး – နောက်ဆုံးစကား 08. နေတိုး – Baby I Miss U 09. ရိန်မိုး – ဖြောင့်ချက် 10. ရိန်မိုး၊ နေတိုး – ယုံပါ 11. ရိန်မိုး – အမုန်းသင့်လေပြေ 12. နေတိုး – ဖန်ဆင်းရှင် 13. ရိန်မိုး … Continue Reading →
December 31, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) ရိန်းမိုး နေတိုး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
သိန်းလင်းစိုး – T-Virus (2013) [Album]
[Released: Nov 29, 2013. Genre: Pop, R&B. Quality: 256kbps MP3] ၀၁။ ​ခေတ်ရှေ့ပြေး ၀၂။ အခမ်းနား​ဆုံး​ (feat. Ye’ Lay, MHL & Kutti) ၀၃။ အညို့ခံရခြင်း ၀၄။ Super Man (feat. ASH) ၀၅။ မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး​ ၀၆။ ထပ်မ​ဝေး​တော့​ဘူး​ (feat. Sett Lett Kaung Htin Kyaw Kyaw) ၀၇။ ကြွေစင် (feat. J-Me) ၀၈။ ​ခေါင်း​အုံး​လေး​လို ၀၉။ ပန်းသီးပုံပြင် ၁၀။ Monster (feat. Lil Z) ၁၁။ မင်းစိတ်တိုင်းကျ ၁၂။ အဆင်ပြေပါတယ် … Continue Reading →
December 28, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) သိန်းလင်းစိုး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
စံလင်း – လူဖမ်းပွဲ (2013) [EP]
[Release: 2013. Genre: Classic Rock. Quality: 192kbps MP3] ၀၁။ မင်းဒုက္ခနဲ့မင်း ၀၂။ မြေကြီးစားသူများ ၀၃။ မတူညီခြင်းတို့ကင်းလွတ်ရာမြေ ၀၄။ လူဖမ်းပွဲ ၀၅။ လွှတ်ချလို့မရတဲ့မီး ၀၆။ ငါတို့ RASU ၀၇။ နွေဇာတ်လမ်း [Download Whole Album – 40 MB] (Mediafire) [Download Whole Album – 40 MB] (Shared) Special Thank @ Axlerose
December 28, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စံလင်း Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
Gကိုလင်း – တစ်နယ်စီခြား (2013) [Album]
[Released: Aug 05, 2013. Genre: Pop. Rock. Quality: 256kbps MP3] ၀၁။ တစ်နယ်စီခြား ၀၂။ အတူရှိမယ့်နေ့ ၀၃။ မင်းရှိတဲ့အရပ် (feat. ဆူဇီ) ၀၄။ ထွက်သွားပါ ၀၅။ ဘယ်တော့မှမမုန်းဘူး (feat. ဟဲလေး၊ ဖြိုးAက) ၀၆။ ဘဝရဲ့နောင်တ ၀၇။ မင်းတစ်ယောက်တည်းပဲ ၀၈။ တိုင်ပင်ဖက် ၀၉။ အိမ်ပြန်ချိန် ၁၀။ အရံလူ ၁၁။ လမင်းတစ်စင်းလို ၁၂။ ဘယ်တော့မှမမုန်းဘူး [Piano Version] [Download Whole Album – 82 MB] (Mediafire) [Download Whole Album – 82 MB] (Droplr)
December 28, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) Gကိုလင်း New Myanmar Albums Leaveacomment
ပိုင်သက်ကျော် – ချစ်ဒုံးယိမ်း (2010) [Album]
၀၁။ အကြင်နာချစ်သူရင်ခုန်နမ်း ၀၂။ သံယောဇဉ်လွန်းတင်သည့်ကြိုး (၂) ၀၃။ တို့ရဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၀၄။ ဝါဆိုမိုးနဲ့စောင့်နေမယ် ၀၅။ ချစ်ဒုံးယိမ်း ၀၆။ အလွမ်းခရီးသည် ၀၇။ ချယ်ရီပွင့်ချိန် ၀၈။ ချစ်သင့်မှချစ် ၀၉။ နွေ ၁၀။ အမုန်းဆယ်လီအမုန်း ၁၁။ အလွမ်းသင့်ရင်ခွင် ၁၂။ အကြင်နာချစ်သူရင်ခုန်နမ်း (Karaoke) [Download Whole Album – 91 MB] (Droplr) [Download Whole Album – 91 MB] (Mediafire) Password: www.ehlar.com
December 28, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ပိုင်သက်ကျော် Myanmar Artist Leaveacomment
KARA – BEST GIRLS (2013) [Album]
[Released: Nov 27, 2013. Genre: Pop. Language: Japanese, Korean. Quality: 320kbps MP3] CD 1 01 Mister.mp3 02 Jumping.mp3 03 SOS.mp3 04 Jet Coaster Love.mp3 05 Now, I Want To Give Thank You.mp3 06 Go Go Summer!.mp3 07 Girls Be Ambitious!.mp3 08 Winter Magic.mp3 09 Speed Up.mp3 10 Girls Power.mp3 11 Electric Boy.mp3 12 Bye Bye … Continue Reading →
December 28, 2013 MMA Asian Artists (K,C,J,T) Kara New International Albums Leaveacomment
Maung Min … ချစ်သူသို့ .. ( Single Track )
Here is new single track of Maung Min (chit thu tho) Check this out!!! Download with Mediafire –
December 22, 2013 Siamond Media Myanmar Artist Myanmar Single Song New Myanmar Albums မောင်မင်း Maung Min Leaveacomment
မိုးသက်နိုင် – မောင့်နှင်းဆီခိုင် (2010) [Album]
၀၁။ ငယ်ချစ် ၀၂။ ​မောင့်နှင်းဆီခိုင် ၀၃။ ကြင်မလိုအမုန်း ၀၄။ တစ်ခန်းရပ်တေး ၀၅။ ကျန်ရစ်တဲ့ကျန်စစ်အသည်း ၀၆။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ၀၇။ စတေးခံမျက်ရည် ၀၈။ အချစ်ကိုအချစ်နဲ့မြူမယ် ၀၉။ တိုင်း​ဌာ​နေကမမ ၁၀။ အစိမ်းရောင်လမ်းခွဲ ၁၁။ နန်းဆန်သူ ၁၂။ မို့မို့ပါးလွင်ပြင် [Download Whole Album – 91 MB] (Droplr) [Download Whole Album – 91 MB] (Rockdizfile) Password: www.ehlar.com
December 19, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) မိုးသက်နိုင် Myanmar Artist Leaveacomment